onlineakhabar.com: यो कस्तो ठाउँ !! जहाँ पुरुषले नाङ्गै बनाएर खोज तलास गर्ने गरिन्छ...
Amazing News, Amazing Woman, Amazing World, International, Main News, Viral News » यो कस्तो ठाउँ !! जहाँ पुरुषले नाङ्गै बनाएर खोज तलास गर्ने गरिन्छ...
रूसको एक पन्ना (ऐमरल्ड) खानीमा काम गर्ने महिलाहरुले यस्तो गुनासो गरे कि काम गरेर घर फर्कने क्रममा उनिहरुको कपडा उतारेर तलाशी लिने गरेको खुलाएका छन् । महिला कर्मचारीहरुहरुलाई यसकारण तलाशी लिने गरिन्छ कि कोही भएको बहुमुल्य पन्ना चोरी गर्न नपाउन् । तर खानतलासको नाममा महिलाहरुमाथी भद्दा व्यवहार गरिएको छ त्यसमा पनि तलाशी लिने व्यक्तिहरु पुरुष भएको बताउँछन् ।
यो तलाशीको क्रममा महिलाहरुको कपडा नै खोलेर नाङ्गै बनाएर खोज तलास गरिने गर्दछ । तलाशीको क्रममा उक्त महिलाहरुलाई अनावश्यक उल्टासिधा प्रश्न समेत गरिने गरेको महिलाहरुको आरोप छ । त्यति मात्र होइन कामदारहरुलाई यो धम्की दिइन्छ कि यदि यसबारे कसै सँग गुनासो गरेमा गायनेकलिजिकल ऐग्जामिनेशन चेयरमा बस्नु पर्ने बस्नुपर्ने समेत बताइन्छ ।
उक्त खानीमा काम गर्ने एक महिलाहरुको समुहले यसबारेमा त्यहीको स्थानीय मीडियालाई बताएका थिए । उनिहरुले यो पनि आरोप लगाए कि काम गर्ने क्रममा नै बिचमा नै महिलाहरुलाई चेक अप रूममा बोलाईने गरिन्छ । यहाँ कुनैपनि कामदार १० मिनेट भन्दा बढी ट्वाइलेट जान मनाही छ । यस्तो कडा चेकअप २००६ देखी हुँदै आएको समेत बताइन्छ ।
Tags : Amazing News Amazing Woman Amazing World International Main News Viral News